प्रहरी अधिकारीलाई प’क्राउ गर्न खोज्दा सेनासंग भि-डन्त, १० जनाको मृत्यु — Sanchar Kendra
प्रहरी अधिकारीलाई प’क्राउ गर्न खोज्दा सेनासंग भि-डन्त, १० जनाको मृत्यु
एजेन्सी । विश्वभर कोरोनाको कहर छ । कोरोनाले अहिलेसम्म लाखौको ज्यान लिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उता प्रहरी र सेनाबीच भएको भि-ड’न्तमा १० जना सुरक्षा क’र्मीको मृत्यु भएको छ ।
पाकिस्तानको करांची स्थित सिन्ध प्रहरी र पाकिस्तानी सेनाका जवानबीच भि-ड’न्त भएको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन्। सेनाका जवानहरुले सिन्धका प्रहरी अधिकृत मोहम्मद अफताब अन्बरलाई प’क्राउ गर्ने क्रममा दुबै पक्षबीच भि-ड’न्त भएको थियो ।
भि-ड’न्तमा सेनाका ५ जवानको मृ’त्यु भएको थियो । पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पिडिएमको अग्रसरमा देशव्यापी विरोध प्र’दर्शन भइरहेका सन्दर्भमा उक्त घ’टना भएको हो । पिडिएमले प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारको बहिर्गमनको माग गर्दै देशव्यापी प्र’दर्शन गरिरहेको छ । करांचीमा आयोजित जुलुमा हजारौंले भाग लिएका थिए ।
जुलुसमा भाग लिएका पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज पिएमएल–एन का नेता सफदर अवानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पिएमएल–एनका प्रवक्ता मरयाम नवाज र सिन्धका पूर्व गभर्नर मुहम्मद जुबेरले सिन्धका प्रहरी प्रमुख मुस्ताक मेहरलाई सेनाले अ’पह’रण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिका चुनाव २०२०- अमेरिकी राष्ट्रपतिय बहसमा देखिएका ५ प्रमुख विमति
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीका उनका प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनबीच राष्ट्रपति पदको चुनावका लागि बिहीबार भएको अन्तिम आधिकारिक बहस (प्रेसिडेन्टल डिबेट) का क्रममा ‘म्युट बटन’ को प्रयोग गरिएको भएको थियो । दुवै नेताले पहिलो बहसको विपरीत यस पटक संयम र शिष्टताको प्रदर्शन गरे ।
दुवै नेताबीचको अन्तिम बहसका क्रममा माइक्रोफोन म्युट गर्नको लागि ‘म्युट बटन’ को प्रयोग गरिएको थियो । पहिलो बहसमा डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन एकअर्कालाई आफ्नो कुरा राख्दा संयम नभएको हुँदा यस पटक ‘म्युट बटन’ को प्रयोग गरिएको हो । जसका कारण बहसको क्रममा असहज स्थिति देखिएको थियो ।
ओहियोको क्लिभल्याण्डमा भएको पहिलो बहसको क्रममा बनेको असहज स्थितिको कारण आयोजकहरुले ‘म्युट बटन’ को प्रयोग गर्नुपरेको थियो । नाश्भिलको बेलमन्ट विश्वविद्यालयमा डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनबीच बिहीबार राति ९० मिनेटसम्म चलेको दोस्रो र अन्तिम बहसमा क्रममा दुवै नेताले संयमताको परिचय दिए ।
‘कमिसन अन प्रेसिडेनिसयल डिबेट’ (सीपीडी) ले गएको सोमबार नयाँ नियमहरुको घोषणा गर्दै बहसमा ‘म्युट बटन’ को प्रयोग हुने बताएको थियो । नियमअनुसार वक्ताहरुको माइक्रोफोन दुई मिनेटको लागि ‘म्युट’ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसअनुसार उनीहरुले निर्बाध रुपमा आफ्नो सुरुवाती टिप्पणी राख्न सक्थे ।
बहसमा बाइडेनले ट्रम्प प्रशासन र त्यसको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना र टिप्पणी गरेका थिए । उनले विशेष गरेर कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिक र अर्थतन्त्र जोगाउन नसकेको आरोप ट्रम्पमाथि लगाएका थिए ।
जवाफमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बाइडेनको आरोपको खण्डन गर्दै आफ्नो कार्यकाल अत्यन्त सफल भएको दाबी गरेका थिए । उनले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लगाइने खोप केही हप्तामा आउने र महामारी पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुने दाबी गरेका थिए ।
तर चाँडै नै खोप आएर महामारी नियन्त्रण हुने ट्रम्पको दाबीलाई भने बाइडेनले अविश्वास गर्दै उनले भनेजस्तो जादु नहुने टिप्पणी गरे । बहसका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकहरु कोरोना भाइरस सँगसगै बाँच्न सक्ने भइसकेको बताएका थिए । ट्रम्पको भनाइले महामारीविरुद्ध लड्न वा महामारीको सामना गर्न वा व्यवस्थापन गर्न ट्रम्प प्रशासनसँग कुनै योजना नरहेको पुष्टि भएको पनि बाइडेनको तर्क थियो ।
‘उहाँको कुरा सुन्ने हो र मान्ने हो भने उहाँले कोरोना भाइरसको महामारी व्यवस्थापनका लागि जादु गर्नेबाहेक अरु केही देखिएन’, बाइडेनले भने । टेनेसी राज्यको नेस्भिलमा भएको बहस कोरोनाविरूद्धको लडाइँ, अमेरिकी परिवार, जातियता, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय सुरक्षा, नेतृत्वलगायतका विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।
अर्का प्रतिस्पधी बाइडेनलाई भने कोरोना भाइरस उत्पत्ति गराएको चीनलाई सजाय दिन के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिएको थियो । जवाफमा बाइडेनले व्यापार र अर्थतन्त्रलाई जोडेर व्याख्या गर्दै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार चलोस् भन्ने आफ्नो चाहना हुने बताएका थिए ।
अमेरिकी पछिल्ला तथ्याङ्क कस्ता छन्?
कोभिड ट्र्याकिङ प्रोजेक्टका अनुसार अमेरिकामा महामारी शुरू भए यता ८५ लाख मानिसहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका छन्। शुक्रवारको सङ्ख्या यस अघिको सर्वाधिक सङ्ख्या जुलाई १७मा रहेको ७६ हजार ८ सय ४२ भन्दा ६ हजारले बढी छ।
गत एकहप्तामा ४ लाख ४१ हजार भन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। जुन जुलाई यताको सबभन्दा धेरै साप्ताहिक सङ्ख्या हो। कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि गत ६ दिनमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर त्यो एप्रिलमा दैनिक २०००को मृत्यु भएको भन्दा कम छ।
अस्पताल भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। शुक्रवारको तथ्याङ्क अनुसार ४१ हजार ४८५ मानिसहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यो अगष्ट यताको सबभन्दा उच्च सङ्ख्या हो तर एप्रिल र जुलाईको भन्दा कम।
कुन राज्य बढ्ता प्रभावित?
अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्र सबभन्दा प्रभावित छ। नर्थ डेकोटा, मोन्ट्याना र विसकन्सिनमा सङ्ख्या अत्यधिक बढिरहेको छ। आसन्न राष्ट्रपतिय चुनावमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ओहायो राज्यमा अधिकारीहरूले तेस्रो दिनपनि अत्यधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला पारेको बताएका छन्।
इलिनोइ र इन्डियानामा पनि शुक्रवार अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी दक्षिण पश्चिमी उटाहमा पनि अत्यधिक सङ्ख्यामा सङ्क्रमित पुष्टि गरिएको छ। उटाहका गभर्नर ग्यारी हर्बर्टले भाइरसले स्थानीय अस्पतालको क्षमतामा नराम्ररी प्रभाव पारेको बताएका छन्।
उनले भने “यदि हामीले गम्भीर पाइला नचाल्ने हो र मास्क नलगाउने हो भने उपचार चाहिने सबैका लागि हामी सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ।” नोभेम्बरको चुनावमा कोरोनाभाइरस महामारी एक प्रमुख एजेन्डा बनेको छ।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र जो बाइडनले बिहीवारको राष्ट्रपतिय बहसमा त्यसैबारे चर्काचर्की गरेका थिए। दुवै उम्मेदवारले महामारी नियन्त्रणको भावी बाटोबारे फरक फरक धारणा प्रकट गरेका थिए।
फ्लोरिडामा शुक्रवार आयोजित र्‍यालीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई महामारी छिट्टै अन्त्य हुने बताएका थिए। ट्रम्पका मतदातालाई बाइडेनले भाइरसको डर देखाएर त्रस्त बनाउन खोजेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाएका थिए। बाइडनले डेलावेरमा आयोजित कार्यक्रममा महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
आफूले जितेमा सबै राज्यमा मास्क अनिवार्य बनाउने राष्ट्रिय परीक्षण योजना कार्यान्वयन गर्ने र पीपीई यथेष्ट बनाउन लगाउने बताएका थिए। बाइडनले आफूले जितेमा खोप उपलब्ध भएपछि सबै अमेरिकीका लागि नि:शुल्क बनाउने बताएका थिए।